Football Khabar » टप–५ लिगमा लेवान्डोस्कीको १० गोल पूरा : कसको कति गोल ?
टप–५ लिगमा लेवान्डोस्कीको १० गोल पूरा : कसको कति गोल ?
जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका स्टार फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्की नयाँ सिजन २०२०–२१ अन्तर्गत युरोपियन टप–५ लिगमा दोहोरो अंकमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । ३२ वर्षका पोलिस फरवार्डले यस सिजन १० गोल गत राति पूरा गरेका छन् । र, सबैभन्दा चाँडो १० गोल गर्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन् ।
गत राति बार्यनले आफ्नो घरमा फ्रान्कफुर्टलाई ५–० ले हराउनेक्रममा शानदार ह्याट्रिक गरेपछि लेवान्डोस्कीको यो सिजनको गोल संख्या १० पुगेको हो । गजब कुरा यो छ कि, उनले सिजनका सुरुआती ५ खेलबाटै १० गोल गरेका छन् । औसतमा उनले हरेक १ खेलबाट २ गोल गरेका छन् । उनले ५ खेलबाट १० गोल गर्दा दुई ह्याट्रिक पनि गरेका छन् । लेवान्डोस्कीले ३ गोलमा असिस्ट समेत गरेका छन् । उनी मात्रै ५ खेलबाट सोझै १३ गोलमा सहभागी भएका छन् ।
यस्तो छ ताजा अवस्थामा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूची :
बुन्डेसलिगा – रोवर्ट लेवान्डोस्की – १० गोल (५ खेल)
लिग वान – केलियन एमबाप्पे – ६ गोल (५ खेल)
लिग वान – इब्राहिमा निआने – ६ गोल (६ खेल)
सिरी ए – फ्रान्सेस्को कापुटो – ५ गोल (५ खेल)
सिरी ए – आन्ड्रेया बेलोट्टी – ५ गोल (४ खेल)
सिरी ए – रोमेलु लुकाकु – ५ गोल (५ खेल)
प्रिमियर लिग – सन हेङ मिन – ७ गोल (५ खेल)
डोमिनिक काल्भर्ट लेविन – ७ गोल (५ खेल)
ला लिगा – लुइस स्वारेज – ४ गोल (५ खेल)
ला लिगा – अन्सु फाती – ४ गोल (५ खेल)
ला लिगा – पाको अल्कासेर – ४ गोल (६ खेल)
प्रकाशित मिति ९ कार्तिक २०७७, आईतवार २०:१०